Iwo akanakisa emahombekombe emadziro eMac | Ndinobva ku mac
Mazuva mashoma apfuura takaparura kupinda nayo iwo makumi mashanu akanakisa kumashure eMacs. Pakati pawo paiva nemamwe mabhichi, asi ndakasara ndiine chido chekupfeka zvakanyanya uye kunyanya iye zvino nechando chiri kuita. Hazvirevi kuti handidi kutonhora, hongu ini handizvide. Chandinofarira ichando uye matsutso. Zvisinei, zvinoitika kwandiri kuti kana tiri mumwaka uno wegore, ndinorangarira zvakawanda pamusoro pegungwa, gungwa, jecha uye mazuva marefu. Asi kana ndiri muzhizha ndinorangarira makomo, nechando uye nousiku hwaunovata zvakanaka. Ngazvive izvo, ini ndichakusiira iwe mashoma mapikicha ane iyo beach theme kuitira kuti uende uchifunga nezvekwauchaenda kuchirimo chinotevera.
1 Hammocks pamhenderekedzo yegungwa
2 Kuvira kwezuva pagungwa
4 Gungwa rakaita sesirika
5 Kuratidzira jecha
6 Ngatidzokerei kuparadhiso
7 Mamiriro ekudzikama
8 Nzvimbo dzakavanda dzemahombekombe
9 Husiku pamberi pegungwa
10 Mamwe mapikicha emahombekombe eMac yako
Hammocks pamhenderekedzo yegungwa
Ngatitange takasimba. Tiri kuenda kunorota gungwa reparadhiso apo tinongoona gungwa rine mvura yakachena yekristaro, miti yemichindwe yakanyatsoiswa pairi panoturika mahammocks maviri. Imwe yako uye imwe ... kune ani nani waunosarudza. Iwe unovata pamusoro pavo uye ndine chokwadi chakazara kuti rinenge dambudziko ripi neripi rinofanira kuenda roga. Handizivi kana akambozviita, asi kunzwa kwokudzikama, kuteerera kun’un’una kwegungwa chete, hakukoshi. Mumiriri akanaka wekuenda zhizha ra2022.
Kuvira kwezuva pagungwa
Ok, mufananidzo uyu une chokwadi chekuiswa kuti upe shanje yakanyanya. Asi ndizvo zvazviri, kusarudza mifananidzo iyo paunoiona inokuendesa kune imwe nzvimbo uye unonzwa sekunge iwe uripo chaizvo. Kuti paunobatidza Mac woona iyi Wallpaper, usapinde hapana chaunoda kunze kwekunakidzwa nezvaunoita. Chiroto, chinangwa chingava kuve wakarara pajecha iro zuva rovira uchiona gungwa. Inoratidzika seguva rakasiiwa rawasvika nekukwasva. Nakidzwa, nekuti kunyura kwezuva kunowanzove kwenguva pfupi, chinhu chakanaka ndechekuti kubuda kwezuva kunouya gare gare.
Kana icho chaunonyanya kufarira pamusoro pegungwa igungwa, chifananidzo ichi chinoshanda chaizvo. inomiririra zvakakosha zvemahombekombe. Crystal yakachena mvura kwaunogona kugeza kana kuchipisa. Ini handikuzive, asi kana ndiri ini, kana ndichigeza handiite zvekurasikira kure nemahombekombe. Makungwa makuru anondipa ruremekedzo rukuru. Ndinosarudza kupinda muchikepe kubva kare. Zvechokwadi nemvura semumufananidzo uyu, dzikama.
Gungwa rakaita sesirika
Iyi Wallpaper ndeimwe yezvandinoda. Ini ndinoda kutora mafoto uye imwe yemifananidzo yandinoda kuita zvakanyanya ndeyekuratidzwa kwenguva refu. Ndiko kuti, siya chivharo chakavhurika kwenguva yakareba uye nenzira iyo kufamba kunowedzera kuoneka. Paunozviita kumvura, zvinoita sekunge uri kutarisa silika. Paunozviita kudenga, makore anowedzera kureba, achiita seanotatamuka. Kana ukaisa zvinhu zvose pamwe chete, chimwe chinhu chinoshamisa chinosara. Kana ukawedzera kuvira kwezuva, une izvi dreamy wallpaper.
Kana kumashure kwese kunoratidzika kunge kwakadzikama uye kwakatsetseka munguva yakapfuura, kumashure kune zvinopesana. Ndaida kuvabatanidza kuti ndione kusiyana kwechimwe nechimwe. Saka iwe unogona kuona kuti kungochinja sei ma parameter ekhamera iwe unogona kuvhara kupfava kana kushata. Kubva pane iyi mamiriro, iwe unoda kuratidza zuva uye ruvara rweorenji rwedenga pakuvira kwezuva. Asi ivhu nematombo zvinoita sekunge zvinobva kuMars. An extraterrestrial landscape, asi iyo inokweva zvine simba kutarisa. Yakanakira Mac.
Mushure mekuona nzvimbo inenge yakaoma kunyange isu tichionawo gungwa, ndinoisa imwe ichakudzoserai kune reveries. Nzvimbo yatinoda kuva tese iko zvino, zvinenge zvechokwadi. Ruvara irworwo rwemvura, jecha riya nemiti yemichindwe inoratidzira nzvimbo dzine mimvuri, rwakakwana zvokukwanisa kupedza maawa pasina chinhu. Ndizvo zvinotaura mufananidzo uyu kwandiri. Inopa nguva yemahara, kuzorora, hapana kushushikana kubva kubasa kana COVID. Zvinoita sekuti tiri munyika yakafanana umo musina matambudziko. Chinhu chinodiwa dzimwe nguva.
Handizive kana chifananidzo ichi chichifanira kushandiswa seMac Wallpaper kana kuiswa patafura yepadivi pemubhedha muimba yangu yekurara. Kuri kuzviona uye kunzwa kudzikama kumativi ose. Ndinogona kuchiisa pa nightstand asiwo patafura muhofisi mangu. Saka kana chimwe chinhu chekunze kana chemukati chichindikonzeresa kushushikana kana kutya, chokwadi kutarisa mufananidzo uyu nemvura inoonekera, vanondizorodza.
Kana iyo yapfuura isingaite seyakakwana kwauri kuti uzorore, ndinokusiira iyi pazasi. Imwe maonero akafanana. Mvura yakachena uye yakadzikama, chidimbu chejecha. Asi pamusoro pezvose, makore machena pamagumo. Ndivo vane protagonists. Makore sedonje. Kupfava, kudzikama uye kuzorora. Mufananidzo wauchazoedza kuona kuti unotaridzika sei paMac. Ini ndatokuudza kare, izvo zvinotaridzika zvakanaka.
Nzvimbo dzakavanda dzemahombekombe
Ini zvakare ndakayedza iyi kumashure paMac.Zvakanaka ndakazviedza zvese ndisati ndazviisa pano. Ndakaedza zvimwe zvakawanda asi ndakavarasa nekuti hazvina kukwana, kana kuti vakavhara zvidhori kana mune dzimwe nzvimbo pachiratidziri vakavhiringwa nemafaira. Zvakadaro, iyi yandinokuunzira izvozvi, ndinogona kukuudza kuti ndeimwe yeakanakisa. Iine zvese zvinotiyeuchidza kuti mabhichi haasi kungozorora uye kudzikama. Isu tinewo sarudzo dzekunakidzwa. For tsvaga nzvimbo dzakavanzwa dzinozivikanwa nevashoma, kunyangwe gare gare ivo vanove vakakura, asi chimwe chinhu chinowanikwa kumarudzi edu. Zuva, mapako, mvura nejecha ... Chii chichatimirira mukati?
Husiku pamberi pegungwa
Mune dzimwe nzvimbo dzemahombekombe tinogona kuwana nzvimbo dzakadai. Mhenderekedzo yegungwa, kunyura kwezuva uye yekudyira yakanaka. Kana pamusoro peiyo nzvimbo iri pakati pemvura, ine maonero anoshamisa nekuti pamusoro wanga uine yakajairika zuva rine makore asi haina kuvharwa zvachose, chokwadi. hapana chinogona kuipa. Iwe unongofanirwa kunakidzwa nemaonero, chikafu uye kunyanya kambani.
Mamwe mapikicha emahombekombe eMac yako
Heano mamwe mamwe mapikicha ari eiyo dingindira rimwe chete. Beach uye chii ivo kusiyana kwezviri pamusoro. Ndinovimba kuti pakati pavo vese pane imwe yaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iwo akanakisa emahombekombe emadziro eMac
Dzidza zvese zvine chekuita nechiyero chekuzorodza chemidziyo yako yeApple